Friday, 25 March 2016 07:29
* Waxaan rumaynayaa kutubta Alle oo rususha uu ku soo dejiyay, waana –iyaga oo ah sidii lagu soo dejiyay- hadalkii Alle oo iyaga u waxyooday si ay sharciga iyo diinta dadka u gaarsiiyaan, kutubtan waxaa ugu weyn:
· Quraanka kariimka oo lagu soo dejiyay nabigeena Muxamed -naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee- .
· Injiil oo lagu soo dejiyay nabi Ciise -nabadgelyo korkiisa ha ahaatee-.
· Towreed oo lagu soo dejiyay nabi Muuse -nabadgelyo korkiisa ha ahaatee-.
· Zabuur oo lagu soo dejiyay nabi Daawuud -nabadgelyo korkiisa ha ahaate-.
· warqadaha lagu soo dejiyay nabi Ibraahim -nabadgelyo korkiisa ha ahaatee-.
* Waxaa ka mid ah kutubtan wax la badalay soo dejinta Quraanka ka hor.
* Quraanka kariimka ayaa ah midka koontaroola kutubtan, xukumana shareecooyinkooda oo dhan iyo axkaamtooda, nasakhayana wixii axkaam ah oo isaga khilaafaya durba markuu soo degay.
* Alle ma aqbalayo maalinta qiyaame Quraanka wax aan ahayn, mana oggolaanayo in lagu camalfalo kutubtii hore Quraanka marka uu ku soo degay ka dib nabigeena Muxamed -naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee- .
* Quraanka waa hadalka Alle oo mucjisada ah, wuxuu leeyahay qudsiyad, wax baadil ahna uma soo dhowaan karo, qofkii ku hadlo run buu sheegi, qofkii ku xukumana cadaalad buu samayn, qofkii ku camalfalana waddo toosan ayaa lagu hanuuniyaa, qofkii qabsadana wuu guulaysanayaa wuuna badbaadayaa, qofkii ka jeedsadana wuxuu ka mid noqonayaa kuwa halaagsamay.
* Ahlu Quraanka waa dadka Alle oo khaaska ah, dadka ugu fiican waa dadka Quraanka bartay dadkana baray, maxaayeelay wuxuu imaanaya maalinta qiyaame isaga oo u shafeecaya qofka akhriyay oo xifdiyay oo ku camalfalay, wuxuu u weyddiinayaa dadkiisa jannada.
* Quraanka quluubta wuxuu ka nadiifiyaa waxa wasakhaynaya oo ka mid ah shahwooyinka shubhooyinka, wuxuu u dhoweynayaa Allaha abuuray -subxaanahu wa tacaalaa-, wuxuu ku boorrinayaa camalka si loogu liibaano jannada joogtada ah.
* Aadaabta Quraanka waxaa ka mid ah:
- Dahaaro iyo weyso.
- Qiblada in loo jeesto.
- Si adab iyo haybad leh in loo fariisto.
- Inaan la boobsiinin akhriskiisa.
- In la muujiyo walbahaar laga walbahaarayo denbiga iyo kagaabinta camalka.
- In lala ooyo cabsida Alle iyo weynida hadalkiisa.
- In codka lagu qurxiyo.
- In codka kor loogu qaadin cabsi laga qabo awgeed tashwiishita dadka tukanaya.
- In lagu tadabburo marka la akhrinayo.
- Qalbiga in la soo xaadiriyo.
- Aayadaha Alle in lagu fikiro.
Inaan yaqiinsano oogidda axkaamta kitaabka Quraanka dadka dhexdooda, waxay ka mid tahay sababaha ugu weyn oo Alle sarrayn nagu siinayo cadowgana aannu kaga guuleysanayno.
* Walaalkayga muslinka ahow u degdeg rabbigaaga, kitaabkana si xoog u qaado, ku dadaal inuu qofna kaaga horraynin xagga Alle, Allena wuxuu ku farxaa inaad u soo laabato si ka daran farxadda dad ay ku farxaan marka uu u soo noqdo qofka ka maqanaa.
More in this category: « Rumaynta malaa'igta Rumaynta rususha »
The Representation of African Cultural Heritage in Chinua Achebe's Novels